The BlackBerry Key2 LE na eze bịarutere Spain | Gam akporosis
BlackBerry KEY2 LE rutere Spain
Na ngwụsị nke Ọgọstụ, n'oge IFA 2018, ekwuputara BlackBerry Key2 LE na nzuzo. Ngwaọrụ ejiri mee ka akara ya laghachi na ihe nlele ya na keyboard QWERTY, nke doro anya na ọ bụ ihe kachasị emetụta ya. Anyị agwalarị gị okwu na nkọwa ya banyere nkọwa ya zuru ezu, ya mere ọ naghị edebe ihe nzuzo maka onye ọ bụla ọzọ.
Ugbu a, ekwuwaala mbata BlackBerry Key2 LE na Spain. Ahịa ebe ekwentị ndị ama ama ama amaala ọtụtụ afọ gara aga. Ajụjụ bụ ma ihe nlereanya a ọ ga-ejikwa nweta akara na ahịa gam akporo, n'ihi ọnụnọ nke keyboard ya.
Versionsdị abụọ nke Blackberry Key2 LE ga-arụ ọrụ na Spain na nzuzo. Ya mere ndị ọrụ ga-ahọrọ n'etiti ụdị nke kachasị ha mma. Ihe dị iche ga-abụ na otu n'ime ha ga-enwe otu SIM yana nchekwa dị n'ime ga-adị iche na nke abụọ.
Ihe akpọrọ Slate Version ga - enwe otu SIM na nchekwa dị n’ime ya nke 32 GB. Ọnụahịa nke ụdị a ga-abụ euro 399, ịbụ ndị dị ọnụ ala karịa nke abụọ. N'aka nke ọzọ, anyị nwere nsụgharị nke Champagne, nke na-abịa na SIM abụọ na nchekwa dị n'ime nke 64 GB, yana ọnụahịa nke euro 429.
Dị ka atụ anya, Blackberry Key2 ọhụrụ a agaghị adị ọnụ ala. Ihe ga-doro anya na-adalata gị Ohere gị nke na-ere ihe na mba ahịa. Mana anyị ga-ahụ otu ndị ahịa na Spain si enweta ekwentị mbinye aka ọhụrụ a, yana keyboard na gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ.
Mwepụta gọọmentị nke BlackBerry Key2 LE ga-eme na Nọvemba 12. Maka ndị nwere mmasị, ọ dịlarị ịde akwụkwọ na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » BlackBerry KEY2 LE rutere Spain
Nokia 7.1 na-ere ahịa na United States na nzuzo
Ozi ọma maka ndị ọrụ Nokia 6.1: A gam akporo 9 Pie dị maka ekwentị